Kooxda Man City oo mar kale cagaha u laabtay kooxda Tottenham misane dib ugu soo laabtay hogaaminta horyaalka + Sawiro – Gool FM
Kooxda Man City oo mar kale cagaha u laabtay kooxda Tottenham misane dib ugu soo laabtay hogaaminta horyaalka + Sawiro
Bashiir April 20, 2019
( England) 20 Abriil 2019 Kooxda Man City ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay Kooxda Tottenham kulan ka tirsanaa horyaalka Premier league, iyaga oona dib ugu soo laabtay hogaanka horyaalka.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ahaa mid aad u xiiso badan Kooxda Man City ayaa ka kubad wanaagsaneed dhigeeda Kooxda Tottenham qeebtii koowaad ee ciyaarta madaama ay la yimaadeen gool.
City ayaa ku soo gashay ciyaarta bilowgii hore dar dar xoogan iyaga oona la yimid goolka koowaad daqiiqadii 5-aad ee ciyaarta waxaana goolkaas oo madax ahaa dhaliyey Foden kaddib caawin uu ka helay laacibka reer Argentina Aguero.
Tottenham ayaa kulanka ku soo gashay qaab difaac waxaana qeebaha dambe ee daafaca u ciyaarayey shan xidig, balse ciyaartoodu waxa ay ku dheehneed jaanis gaad.
Qeebtii hore ee kulanka Kooxda Spurs ayaa heshay labo jaanis oo gool loo filan karay, lkn uma suurta galin in fursadahaan ay ka faa’ideystaan oo ay gool u badalaan.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku soo idlaaday 1-0 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Man City, waqti nisiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Ciyaartoyda Tottenham ayaa soo bandhigay ciyaar cajiib aheyd oo ku dhisneed weerar qeebtii dambe ee ciyaarta balse daafacyada kooxda Man City iyo gool hayahoodaba ay waxa ay qabteen shaqo wanaagsan.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka ayaa ku soo dhamaaday 1-0, city waxa ay goolkaas kaga mahad celinayaan da’yarkooda Foden kaas oo kooxdiisa ka caawiyey in dib ugu soo laabtaan hogaanka horyaalka.
RASMI: Kulamada ka harsan Premier League oo isbadel lagu sameeyay....(Maxay tahay Sababta??)
RASMI: Liiska musharixiinta abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican Premier League oo la shaaciyay & Moxamed Saalax oo laga reebay